Is la yaab is la diid! | shumis.net
Home » Layaab » Is la yaab is la diid!
Is la yaab is la diid!
Waa mid soo jireen ah, maaha ugub waana arrin curad ah in dadku kala aragti duwan yahay, kala xulasho yahay, kala alab iyo askun duwan yahay.
Maaha inaad ka filato qof walba sida aad adigu dooneyso, haddaad ku arki weydona maaha inaad col iyo ciifo u qaaddo.
Waxaa isoo wacay nin widaaygey ah oo aan aqaanay muddo aad u dheer hadda kuba dhaw 20 sanno, wuxuu ka shaqaynayey muddo ku dhaw 15 sanno gobol ka mid ah gobollada dalka, wuxuu ka soo billaabay shaqada halka ugu hooseysa, isla goobtii oo ah xafiis dowladeed ayuu ka gaadhay in nin qudha uga sarreeyo oo laga dhigo maareeye ku xigeenka. ma doonayo goobta iyo isaga midna inaan carrab dhabo.
Bulshadaa xumaanta is farta.
Maalin dhaweyd ayuu wuxuu ii sheegay in maalintii la magaacabay ay la kulmeen dad badan oo xigtadiisa ah, dadkaas waxaa ka mid ahaa nin Odaya oo alle barri badan, oogga xilalka eebbe faray, af gaaban laguna tiriyo dadka dhawrsoon.
Wuxuu yidhi: Ninkii odayga ahaa ayaa markuu ii hambalyeeyey wuxuu ii raaciyey dardaaran: ” Adeer ninkii ina hebel ee halkan kaaga horreeyey guryona waa ka dhistay waxna waa ka qabsaday ee yeysan doqoniimo ku qaadine inta aad haysato kanshada ka fara qabso”
Wiilka oo dhallinyaro ahaa ayaa ugu warceliyey: ” Adeer masaajidna waad ka soo baxday allena waad baryeysaa oo wardi baad rogeysaa, waxaadna igula talineysaa inaan dadka iyo dalka boobo oo dhaco ee sidee wax yihiin”
Dad badan oo meesha joogay ayaa maqlay doodii labadooda waxaana aad looga xumaaday sida foosha xun ee ninkii wanaagga laga filayey ula dardaarmey wiilka.
Waxaan uga socdaa qofka dadka kuu xiga xumaantiisa waa inaad u aragtaa sida aad u aragto kuwa kale xumaantooda, haddaad kiina xumaantiisa daboosho, kulana dardaaranto isku mid baad tihiin.
Noo daa wasiirkeena.
Sheekadan waxay na dhex martey aniga iyo widaay kale waana tan igu jujuubtey inaan idinla wadaago.
Waxaa telefoonkayga iga soo wacay nin odaya oo aanu jaal nahay aadna isu tixgelino, wareysi iyo wacaal kaddib wuxuu yidhi:
Jaalkay: Niyaw beryahan maxaa wasiirkayaga ku daba dhigey aad baad ugu foogan tahaye.
Waxaan idhi: Ma wasiir gaar ah oo aad leedihiin baa jira mise waxaad ula jeeda mid qoladiina ah?.
Jaalkey: Mayee kan beesha waad garanaysaa waad is yeel yeelaysaaye.
Waxaan idhi : Wasiiradu way inaga dhaxeeyaan ee ninkii ku magacaaban wasiirka beeshiina, waxaa igu balana inaanan soo hadalqaadin, ninkiise wasiir iyo magac Soomaaliyeed ku magacaaban ee danbaa naga dhaxaysa wuxuuna ka mid yahay adeegayaasha bulshada marka wixii uu gefo ama ka gedman waa ka hadlayaa, sida aan kuwa kaleba uga hadlo.
Jaalkey: Inaadeeroow dee waxaagu maaha ka hadlid ee waa toosh ku ifin iyo bah dilid, ee wasiirka noo daa.
Iyadoo halkaas noo mareysa ayuu Jaalkay yidhi:
” Bal eeg wasiirkii xumaa ee nacaska ahaa wuxuu sameeyey?”
Waxaan idhi waa kuma kaas nacaska ah ee aad sheegaysaa?
Wuxuu yidhi: “Waa wasiirkii Amniga oo ninkii horjoogaha ahaa markii la qabtey markiiba hore ka shaaciyey qoraal halkan lagu soo qorey baan hadda arkay”
Waan qoslay weliba si niyad ah, waxaan ku qoslay Jaalkay wuxuu maagayaa wasiir beel kale ah, wuxuuna doonaya inaan waxba laga sheegin wasiirka beeshooda.
Anigoo isaga doonaya inaan ilaaqo ayaan idhi: ” Wasiirkayaga noo daa ileyn wasiirkiinaba ma dooneysid in wax laga sheege”
Markaasuu intuu soo baraarugay yidhi: Maya sidaa ulama jeedee anigu waxba kama qorayo, balse, saw gef maaha wuxuu sameeyey?
Waxaan idhi: Wey noqon kartaa ! waadna ku qumanaan kartaa inaad saluugto siduu wax u wado, balse wasiirku waa wasiir dowladeed oo dadka oodhan u dhaxeeya waa masuul, hadduu gurigiisa jooga nina kama hadleen, hadduu ganacsanaya sidoo kale, waxaase hadda uga hadlaysaa inuu yahay adeege bulsho.
Wuxuu yidhi Jaalkay: Waa dhab arrinkaasi,
Waxaan ku idhi: Haddaba wasiirkiinii aad ergada u ahayd ka warran isaga?
Jaalkay: Intuu si fiican u qoslay ayuu yidhi, bal hawshaada iska wado ka debci odayga waa nin wanaagsane.
Waxaan idhi: Anigu kuma odhanayo wasiir beeshayda ah ka dabci iyo u naxariiso, ee hadduu dalka iyo dadka meel xun ku wado ka hadal oo bulshada tus.
Haddaba arrinta iga yaabisay ee ilaa hadda aanan garanin baa ah.
Anigu si guud waxaan u saluugsanahay guud ahaan dowladda Madaxweyne Farmaajo hoggaamiye, mid igu beel ah iyo mid uga jufo ahba, mana jiro wax aan ku kala xigsadaa waa rag doon wada saaran oo isku koox ah.
Yaa ii sheegi kara ninka wasiirka beeshoodana taageersan, Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisalwasaare Kheyre iyo wasiirada kalena saluugsan magaca loogu yeedhayo, Taageere iyo ka soo horjeede?
Qofku wax waa dhaliili karaa, waana saluugi karaa, waa taageeri karaa waana la dhacsanaan karaa, haddaba dad isku koox ah midna gaar u jecloow midna gaar u necboow, anigu waan garan waayey.
Taageere noqo kuna bireysnoow dhammaan madaxda dowladda.
Ka soo horjeede noqo: Wixii aad saluugto diid wixii wanaagsana ha qarin, maxaa yeelay dalka iyo dowladnimadaba waa la wada leeyahay nin yimi malaha loomana nacayo oo beriba tegaya.
Title: Is la yaab is la diid!